★မြန်မာ့အလင်း★: ကျောက်တုံးကြီးက ဘယ်မှာလဲ?
ဆော်ဒီ မွတ်ဆလင် တွေဟာ မွတ်ဆလင် အဆုံးအမကို တိတိကျကျလုပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ တိကျလဲဆိုရင် ကျောင်းတွေမှာ ကမ္ဘာကြီးကို လုံးတယ်လို့ သင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ဆီက ကုလားတွေဟာ ဆော်ဒီက kabbah ဆိုတဲ့ အမည်းရောင် လေးထောင့်အတုံးကြီးရှိရာကို မှန်းပြီးကန်တော့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီးဟာ ပြိုကွဲစပြုလာပါပြီ။ အခုဆို ဆော်ဒီတွေကတော့ ကန်တော့ချင်ရာ အရပ်ကို ကန်တော့ပါတယ်။ အာရပ်တစ်ယောက်ကတော့ အဲဒါ ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Allah က နေရာတိုင်း အရပ်မျက်နှာတိုင်းမှာ ရှိနေလို့ဆိုပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် ချီးတွင်းထဲမှာလဲ ရှိမှာပေါ့နော်?
အဲဒီအဖြစ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက် အရေးမကြီးသယောင်မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလားတွေကတော့ အင်မတန်ကို ခံစားရမှာပါ။ ၀မ်းသာစွာနဲ့ ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:50 AM
ငါလိုးပြီးရတဲ.ကလေးကို တရားကျင်.ခိုင်းရင် မင်းတို.ကိုးကွယ်တဲ.ဘုရားအသစ် ၁ ကောင် အဲမှားလို. ၁ ပါး ဖြစ်မှာဘဲ ကိုယ်.ဘာသာကိုယ် အေးအေး ဆေးဆေး နိုင်ငံရေး လုပ်စမ်းပါ ကတုံးရာ